Toddobaadka Wadnaha | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Febraayo 8-19, 2021
Isku soo wada duuboo ardayda iyo shaqaalaha MHS si aad lacag ugu ururisaan Minnetonka Qoysaska Saaxiibada ah, waa urur caawiya ardayda Minnetonka iyo qoysaskooda iyaga oo bixinaya biilkooda kululeynta, lacagta dalabka ACT, xisaabiyaha garaafka, quraacda, gawaarida ilkaha, dhaqdhaqaaqa ama khidmadaha ciyaaraha, ama xitaa jubbado.
Faa'iido Casho & Xaraash aamusnaan ah
Waxqabadyada Toddobaadka Wadnaha
Ka dalbo ama wax ka cun Big Big's (horey Tino's) Febraayo 16, 4: 00-7: 30
Sheeg "Saaxiibbada Qoyska" si aad ugu deeqdo boqolkiiba faa'iidooyinka HeartWeek
Xullo Spaghetti & Meatballs ama Casho Pizza ah
Xaraashka aamusnaanta ee khadka tooska ah
Wuxuu furmayaa Febraayo 15keeda 8:00 subaxnimo, Wuxuu xirmayaa Febraayo 18keeda 8:00 pm
Lacag kusamee sheyga ku xir xariirka Vanco
Ka soo qaado alaabada Galitaanka Galbeed ee MHS Febraayo 21keeda ama 22da inta udhaxeysa 8:00 iyo 3:00
Jimcaha Fest 2021
Jimco, Febraayo 12
Hawlaha fasalka 9aad-10aad: 9: 00-11: 00
Hawlaha fasalka 11aad-12aad: 12: 00-2: 00
$ 5 qofkiiba
Deeqaha, Iibsashada & Hawlaha Saxeexyada
Ardaydu waxay ku deeqi doonaan inay kaqeybqaataan munaasabado kala duwan agagaarka xerada MHS; dhammaan dhacdooyinka iyo faahfaahinta hoos ayey ku taxan yihiin. Dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay xirtaan maaskarada inta lagu jiro dhacdooyinkaan oo ay u hoggaansamaan tilmaamaha amniga ee lagu dejiyay goob kasta. Waxaa jiri doona kormeer shaqaalaha MHS dhacdo kasta si loo hubiyo badbaadada dhammaan kaqeybgalayaasha.
Ardaydu waxay iska diiwaangeliyaan oo ay ku bixiyaan waxqabadyada barta ' Vanco link' . Waa inay keenaan daabacaadda risiidhkooda ama taleefan ama Ipad oo ay la socdaan nuqul elektiroonig ah oo ah risiidka gelitaanka. Dhamaan qalabka waa la siinayaa.
Broomball (Xarunta Waxqabadka Pagel - Rink 1)
Kooxo ka kooban 4 qof
Ku guuleystayaasha mid waliba wuxuu helaa abaalmarin
Rink ayaa loo kala qaybiyaa kala bar, wareegaya inta u dhaxaysa laba koox oo ka kooban 4 qof (4v4) oo ku ciyaaraya nus kasta, markaa wadar ahaan 16 qof oo markiiba ciyaaraya
Ku guuleystaha dhinac kasta ayaa ciyaari doona dhamaadka si loo ogaado guusha guud
Kubbadda Koleyga (West Gym)
Kooxo ka kooban 5 qof
Jimicsiga jimicsiga wuxuu u qeybsan yahay kala badh, isagoo wareegaya inta u dhaxeysa labo koox oo ka kooban 5 qof (5v5) oo ku ciyaaraya qeyb kasta, marka wadar ahaan 20 qof oo markiiba ciyaaraya
Dodgeball (Jimicsiga Bariga)
Kooxo ka kooban 5 qof (si aan kala sooc lahayn ama horay loo go'aansaday)
Filim (Qolka Madasha iyo Madadaalada)
Filimku wuxuu ka ciyaari doonaa shaashadda weyn
Ardaydu waxay u codeyn doonaan filimka ay daawan doonaan bilowga - dhammaantood waa suuragal in lagu qiimeeyo PG-13 ama ka hooseeya
Yoga (Sanduuqa Madoow)
La soco fiidiyowga yoga ama samee macallin lagu hago, fadhiga bulshada oo kala fog
Qeybta woqooyi ee qubbad
Cowsku wuxuu u kala qaybsamay gobollo, isagoo ku wareegaya laba koox oo ka kooban 2 qof (2v2) oo shabaq kasta ka ciyaara
Dejinta Tartanka, oo leh koox guuleysata dhamaadka
Qeybta koonfureed ee qubbad
Cowska ayaa loo qeybiyaa kala badh, isagoo wareegaya inta u dhaxeysa laba koox oo ka kooban 5 qof (5v5) oo ku ciyaaraya qeyb kasta, marka wadarta guud ee 20 qof oo markiiba ciyaaraya
Dhowr wareeg oo kala duwan oo ah su'aalaha Kahoot
Abaal marinno ku guuleysta wareeg kasta
Jimcaha, Febraayo 12, 12: 00-3: 00, ee Qubuuraha
Kooxo ilaa 6 qof ah, Ugu badnaan 16 Kooxood
$ 10 qofkiiba
Dhammaan fasalada waa la soo dhaweynayaa!
Waa inaad ka diiwaangelisaa kooxdaada xiriirkan , oo aad ku bixisaa bogga Vanco .
Tartan Saacadda 2aad
Ku ururi lacag caddaan ah fasalka dhexdiisa iyo / ama ku samee tabarucaadka internetka Vanco: Febraayo 8-19
Daabac boodhadh macallin kasta oo saacadda 2aad wata oo leh lambarka QR
Haddii koox uruuriso $ 100 + ku rid shaashadda donuts ama bagel (oo laga adeegto kafateeriyada) inta lagu jiro fasalka
Fasalka ugu sareeya ee lacag uruurinta ayaa quraac lagahelaa (kafateeriyada)
Kaalinta 2-aad ayaa la siiyaa donuts ama bagel (oo laga adeegto kafateeriyada)
Shuffle Macaan (Dhacdo Cusub Sannadkan !!)
Dhammaan ardayda, shaqaalaha, qoysaska, xubnaha bulshada way soo dhaweynayaan!
Sabti, Febraayo 20
Waqtiyada kaladuwan ee kaladuwan ee la heli karo si loo ilaaliyo taxaddarrada nabadgelyada ee Covid
Lammaanaha 5K - U tartama waqtiga ugu fiican ee la isku daro
$ 20 qofkiiba
waxaa ka mid ah baakadda diiwaangelinta oo ay ku jiraan foojarka funaanad, galoofyo, iyo waxyaabo kale oo wanaagsan!
Ikhtiyaar ikhtiyaari ah:
Orod / Soco 5K "guriga"
Xiriirinta foomka Google ee waqtiyada dhajinta
Bixinta & diiwaangelinta halkan
Burburi Daanadaha & Roses
Ardaydu waxay iibsan karaan qasacad soodhadh ah iyo ubax si loogu geeyo saaxiibkood (isku dhexjiran) inta lagu jiro fasalka midkood Arbacada 2/17 (kooxda A) ama Khamiista 2/18 (koox koox B)
Xubnaha Dowladda Ardaydu waxay gaarsiiyaan fasallada Arbacada 2/17 (A) & Khamiista 2/18 (B)
$ 5 (Burburin kara oo wada kacay)
Iibso oo bixi macluumaadka qaataha Vanco Isniinta 2/8 - Axada 2/14
Buuxi sahanka dulsaarka Jimcaha, Febraayo 12: https://www.surveymonkey.com/r/WJ5YCMR
Matchomatics-ka ayaa ka wadi doona xogta qof kasta oo ka tirsan MHS oo buuxiyey sahanka si uu kaaga caawiyo inaad hesho ciyaartaada ugu fiican!
Ku bixi natiijooyinkaaga Vanco - $ 3 qofkiiba
Xiriir ayaa emayl laguu soo diri doonaa usbuuca Febraayo 16-19 si aad u hesho natiijooyinkaaga, ka dib markaad bixiso.
Dhammaan buundooyinka waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay ka qaybgalaan!
Lacag ururin dheeraad ah
Boba Tonka: Tag Boba Tonka (on Hwy 7 West of MHS) bisha Febraayo kuna soo ururi si aad ugu tabarucdo HeartWeek
Chipotle (faahfaahin dheeri ah oo soo socda)
Chick-fil-A (inbadan oo soo socda)
Arag dhammaan Deeqaha, Iibsashada & Waxqabadyada Isdiiwaangelinta
Saaxiibada Qoysku waa shirkad aan faa'iido doon ahayn oo Minnesota ah oo ay IRS u aqoonsan tahay shirkad 501 (c) 3 iyo Gobolka Minnesota oo ah urur cashuur dhaaf. Waxaa ka diiwaan gashan Xeer ilaaliyaha Guud ee Minnesota si uu lacag u codsado. Wax lacag ah kuma qaado adeegyada laakiin waxay ku tiirsan tahay tabarucaadka shakhsiyaadka, aasaaska, shirkadaha iyo ururada bulshada.
Dhaqaalaha ugu badan ee Saaxiibtinimada Qoyska waa tan ardayda ee Dugsiga Sare ee Minnetonka taas oo aruurisa lacagaha iyada oo loo marayo "Toddobaadka Wadnaha" bisha Febraayo sannad kasta.
In ka badan 100 macallimiinta Dugsiga Sare ee Mtka iyo shaqaalaha kaleba waxay u qoondeeyaan lacag Qoysaska Saaxiibbada ah iyada oo loo marayo hadiyado deeq-bixiyeyaasha loogu talagalay United Way.
Kaniisada Ridgewood waxay ku taageertaa Saaxiibada Qoyska miisaaniyadooda hawlgallada iyo iyadoo siisa boos xafiis iyo taageero maamul.
Shakhsiyaadka ku deeqaya shakhsiyaadka waxay ku taageeraan Saaxiibada Qoyska iyada oo loo marayo tabarucaad toos ah iyo deeqaha United Way iyada oo loo marayo loo shaqeeyeyaasha.
Dhowr aasaas oo samafal ah ayaa bixiya deeqo.
In ka badan 95% ee lacagaha Saaxiibada Qoyska waxaa loo isticmaalaa barnaamijka fidinta iyo kaalmada dhaqaale ee tooska ah.
Hawlaha Barnaamijka Asxaabta Qoyska
Cuntada Dugsiga Sare ee Minnetonka
Saaxiibada Qoyska waxay lashaqeeyaan Caribou si ay cunno u siiyaan ardayda dhigata Dugsiga Sare ee Minnetonka oo aan haysan agabyo ay quraac ugu cunaan guriga.
Saaxiibada qoysku waxay kafaala qaadaan baska ilkaha ardayda halista ugu jirta ee MHS kuwaas oo la aqoonsaday, la baaray lana daaweeyay oo ay ku jiraan buuxinta.
Saaxiibada Qoysku waxay ka caawiyaan helitaanka ballamo, gaadiid waxayna diyaariyaan baaritaanno caafimaad iyo tixraac loogu talagalay ardayda halista ugu jirta iyaga oo aan helin daryeel caafimaad. Saaxiibada Qoyska sidoo kale waxay lashaqeeyaan Lions Club si ay ugu helaan imtixaannada indhaha iyo muraayadaha ardayda halista ugu jira.
Abaalmarino Samaroon oo Fiican
Saaxiibbada Qoyska waxay iskaashi la yeeshaan Booliska Minnetonka si ay u siiyaan abaalmarin ardayda ka baxda jidkooda si ay u caawiyaan kuwa kale.
Shaqaalaha wacyigalinta Qoyska waxay joogaan maalin walba iskuulada sare iyo kuwa dhexe si ay u dhageystaan oo ay ula wadaagaan ardayda. Shaqaalaha wacyigalinta waxay kuxiranyihiin ardayda ubaahan dhiirigalin iyo taageero si ay ugu guuleystaan guriga, iskuulka iyo bulshada dhexdeeda.
Caawinta Maaliyadeed ee Tooska ah
Saaxiibada Qoysku waxay ka caawiyaan ardayda iyo qoysaska halista ku jira bixinta qarashka dharka, qadooyinka ardayda, khidmadaha fasalka, khidmadaha ciyaaraha, iyo khidmadaha howlaha iskuulka marka lagu daro gaadiidka iyo kharashaadka guryaha sida kirada iyo yutiilitida.
Saaxiibada Qoysku waa qayb muhiim ah oo ka tirsan kooxda dhibaatooyinka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka ee wax ka qabta dhibaatooyinka ardayda iyo shaqaalaha
Taageero socota iyo dhiirigalin
Saaxiibada Qoysku waxay bixiyaan taageero shaqsiyeed oo waqti dheer ah iyo caawimaad dhaqaale markay jiraan arrimo waaweyn oo xagga qoyska iyo dhaqaalaha ah. Tani waxay badanaa ka gudubtaa xadka dhibaatada degdegga ah marka la eego waqtiga iyo goobta.
Barnaamijyada xagaaga ee Dugsiga Sare ee Minnetonka
Saaxiibada Qoyska waxay lashaqeeyaan Cub Foods iyo Caribou si ay u siiyaan cunto fudud iyo cabitaanno sidoo kale dhiirigelin iyo taageero maalinle ah ardayda (oo dhammaantood ka dambeeya shuruudaha qalinjabinta).
Barnaamijka Xagaaga Bulshada
Saaxiibada Qoysku waxay iskaashi la yeeshaan barnaamijyada bulshada ee mashaariicda guryaha ee dakhligoodu hooseeyo iyagoo siiya taageero iyo cunto fudud dhalinyarada iyo qoysaskooda.
Saaxiibbada Qoyska waxay iskaashi la leeyihiin Timber Bay, Tree House, iyo Bren Road Alternative School oo barnaamijyo wadajir ah nagula leh qolka jimicsiga ee Kaniisadda Ridgewood.